Pivo Apk 2022 Download Ho an'ny Android [E-Wallet] | APKOLL
Miverina miaraka amin'ny fampiharana mahagaga hafa ho anareo rehetra izahay, izay ahafahanao mahazo ny rafitra fandoavam-bola mandroso indrindra. Izy io dia fampiharana Android, izay fantatra amin'ny anarana hoe Pivo Apk. Manolotra fandefasana vola an-tserasera, fandoavam-bola, famandrihana ary endri-javatra maro hafa maimaim-poana izy io.
Araka ny fantatrao dia misy karazan'olona samihafa manodidina anao. Noho izany dia tsy maintsy mailo foana ny olona, ​​saingy tsy azo atao ny manara-maso ny hafa foana. Saingy ny olana momba ny fiarovana dia mitranga amin'ny olona tsy miraharaha ny fahadisoan'ny hafa.
Noho izany, ny iray amin'ireo olana lehibe, izay azon'ny olona rehetra atrehina dia noho ny vola. Raha hivoaka ianao, miaraka amin'ny paosinao feno vola, dia tsy azo antoka mihitsy ianao. Ny snatchers dia afaka mahita anao mora foana ary maka ny volanao rehetra ary kofehy iray ho an'ny fiainana ihany koa. Noho izany, manana vahaolana amin'ity olana ity ve ianao? Raha tsia dia aza manahy.
Izahay eto dia manana ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny olanao rehetra, izay ahafahanao mivezivezy mora foana na aiza na aiza, miaraka amin'ny vola an'arivony ao am-paosinao. Ny vahaolana tsotra dia ity rindranasa ity, amin'ny alalanao no fomba fanao tsara indrindra amin'ny fandoavam-bola sy zavatra hafa mifandraika amin'ny vola. Ka te hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao? Raha eny, dia mijanona miaraka aminay vetivety fotsiny ary hijery izany rehetra izany.
Topimaso momba ny Pivo Apk
Izy io dia fampiharana Android Finance, izay manolotra serivisy e-wallet tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa. Manome ny serivisy izy io, amin'ny alàlan'ny alàlan'ny mpampiasa dia afaka mandoa vola be amin'ny fomba mora foana nefa tsy mampiasa vola. Maimaimpoana ny serivisy sy ny endri-javatra rehetra azo ampiasaina amin'ity rindrambaiko ity.
Noho izany, ny vola no zava-dehibe indrindra amin'ny fiainana, izay ahafahan'ny olona mitantana mora foana ny fomba fiainany sy ny asa hafa rehetra. Ny iray amin'ireo olana mahazatra indrindra dia mitranga, rehefa mila vola ny iray amin'ireo namanao. Noho izany, miaraka amin'ity fampiharana ity dia mila mamindra ny vola eo noho eo ianao.
The Wallet nomerika manolotra fomba haingana sy mora amin'ny famindrana vola avy amin'ny kaonty iray mankany amin'ny iray hafa, izay ahafahan'ny mpampiasa mandefa vola mora amin'ny olona rehetra ary afaka mahazo vola amin'ny mpampiasa hafa. Io no endri-javatra voalohany amin'ity fampiharana ity, izay matetika tian'ny olona izany.
Araka ny fantatra dia tsy tia mivoaka miantsena intsony ny olona ary tsy azo antoka ihany koa ny mivoaka eny amin’ny toerana be olona. Noho izany, misy fivarotana an-tserasera an-taonany maro, izay manolotra karazana vokatra rehetra, izay azon'ny mpampiasa mividy sy mampiasa serivisy fandoavam-bola an-tserasera Pivo App.
Mitsidika toerana samihafa matetika ve ianao? Raha eny, dia amin'ny alàlan'ity fampiharana ity dia azonao atao ny mahazo ny serivisy bus tsara indrindra. Azonao atao ny mividy tapakila bisy, amin'ny alàlan'ity rindrambaiko ity, ary mivezivezy mora foana amin'ny toerana iray. Ny endrika mahavariana indrindra amin'ity rindrambaiko ity dia ny fihenam-bidy.
Raha mampiasa ity fampiharana ity ianao, amin'ny fomba fandoavam-bola rehetra, dia hahazo fihenam-bidy lehibe amin'ny vokatra na serivisy ianao. Araka ny fantatrao dia manana olana amin'ny vola foana ny mpianatra, izay mora voavaha amin'ny fampiharana ity. Izy io dia manolotra fihenam-bidy samihafa sy tolotra manokana ho an'ny mpianatra, izay ahafahan'izy ireo mahazo ny serivisy tsara indrindra.
Mieritreritra daty tsy ampoizina? Raha eny, dia manaova latabatra ao amin'ny trano fisakafoanana romantika eo noho eo ary gaga ny vadinao. Misy zavatra mahafinaritra mahafinaritra kokoa, izay azonao atao amin'ny fampiharana ity. Noho izany, sintomy fotsiny ny Pivo ho an'ny fitaovana Android ary manana ny fampiasa amin'ny fandoavambola tsara indrindra.
Anaran'ny fonosana fi.op.android.lompsa
Developer Vondrona OP ara-bola
Serivisy E-Wallet tsara indrindra
Famindrana vola haingana
Serivisy fandoavam-bola an-tserasera
Aloavy avy hatrany ny volanao rehetra
Serivisy fandoavam-bola amin'ny magazay
Famandrihana any amin'ny trano fisakafoanana
Fampiharana mifandraika amin'ny vola ho anao.
Hita ao amin'ny Google Play Store izy io, saingy tsy mila mitsidika ianao ary mandany fotoana. Hizara ny rohy fampidinana aminao izahay rehetra, amin'ny alalanao no ahafahanao misintona haingana. Noho izany, tsindrio fotsiny ny bokotra fampidinana, izay misy eto amin'ity pejy ity, ary miandry segondra vitsy.
Pivo Apk no fampiharana tsara indrindra ho an'ny rehetra, hanana traikefa momba ny fandoavam-bola tsara indrindra. Noho izany, misintona fotsiny ity fampiharana ity ary mahazo tombony amin'ny serivisy rehetra misy. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay, amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
Sokajy Apps, Finance Tags Wallet nomerika, Pivo Apk, Pivo Ho an'ny Android Post Fikarohana
Expert Repair Apk Download Ho an'ny Android